Pulse: Mee ntụgharị 10% na ihe akaebe Social | Martech Zone
Weebụsaịtị na-agbakwunye ndụ elekọta mmadụ àmà ọkọlọtọ mee ka ọnụego mgbanwe ha na ntụkwasị obi ha kwalite. usu na-enyere ndị azụmaahịa aka igosi ọkwa nke ezigbo ndị mmadụ na-eme ihe na saịtị ha. N'ime ebe nrụọrụ weebụ 20,000 na-eji Pulse ma nweta ihe nkezi ntọghata ntọt nke 10%.
Enwere ike ịhazi ọnọdụ na oge nke ọkwa ahụ nke ọma yana, mgbe ha jidere mmasị onye ọbịa ahụ, ha anaghị atụgharị uche na ebumnuche onye ọbịa ahụ nọ. Ọ bụ ezigbo mma maka peeji ọ bụla nke na-anwa ịbugharị ntụgharị - site na peeji nke ọdịda na ibe ecommerce.
Ndagharị Pulse Video
Osimiri na-ekpo ọkụ egosiputa onu ogugu ndi mmadu mere ihe na saịtị gi na nso nso a. Ọ dị mma maka ibe akwụkwọ azụmahịa dị elu dị ka opt-ins ọdịnaya, ịdebanye aha webinar, na nnwale efu. Nkezi ntụgharị ntụgharị: 15%
Ndụ ndị ọbịa dị ndụ na-egosi ọnụọgụgụ ndị mmadụ na-elele ihu akwụkwọ ugbu a ma ọ bụ saịtị gị niile. Ọ dị mma maka inye onyinye yana ngwaahịa nwere oke dị ka ngwaahịa anụ ahụ, ntinye akwụkwọ, yana akwụkwọ ahịa tiketi tiketi. Nkezi ntụgharị ntụgharị: 8%
Ihe Omume a na-egosi ndepụta nri nke ezigbo ndị mere ihe na nso nso a na saịtị gị. Zuru okè na peeji nke okporo ụzọ dị elu dịka ebe obibi gị, opt-ins content, na ịdebanye aha webinar. Nkezi ntụgharị ntụgharị: 10%
Nnwale A / B na-enyere ndị ahịa aka ịnwale ma hazie mkpọsa ha, wee tụọ nsonaazụ ha.
usu jikọrọ ya na Mgbasa Ozi Na-arụ Ọrụ, Oge Acuity, Airtable, Appointlet, Autopilot, Aweber, Big Commerce, Akwụkwọ Dị ka Onye Isi, Braintree, Bucket.io, Calendly, Chargebee, Clickfunnels, Kpọtụrụ Kọntaktị, ConvertKit, Demio, Drip, EasyWebinar, Ecwid, Eventbrite, Everwebinar, Nzaghachi, GoToWebinar, ndọda Forms, Gumroad, HubSpot, Infusionsoft, Instapage, Intercom, Jot Form, JVZoo, Kajabi, Lead Quizzes, Leadpages, Livestorm, Magento, MailMunch, ManyChat, Marketo, Maropost, Mixpanel, MoonClerk, Ontraport, OptimizePress, OptinMonster, Paypal, Samcart, Oge Ụdị ụdị, Mgbapu, Webflow, WebinarJam, WooCommerce, WordPress, Wufoo, YouCanBook, Zapier, na Zoho Forms.
Gbalịa obere oge maka mkpụrụ ụbọchị 14
Mara: Anyị bụ ndị mmekọ nke usu
Tags: Mgbasa Ozi Arụ ỌrụOge AcuityỤgbọ eluOge akara akaautopilotAWeberNnukwu ahiaAkwụkwọ dị ka onyeisiBraintreeỊwụ.ionke ọmaNchajiPịaFunnelsKpọtụrụ na mgbe niileConvertKitDemiontapuEasyWebinarecommerce mataEcwidihe omumeEverwebinarGetResponsegotowebinarụdị ndọdaGumroadokpokoroMicrosoftNtughariájáỤdị JotNKWOKajabiEbute QuizzesLeadPagesNdụmagentoMailMunchỌtụtụ mgbeahịaMaropostMixpanelAkwụkwọ akụkọakụkọ mkpesaOptimizePressoptinmonsterPaypalàmàSamcartNhazi ogeZipunkwado mmadụsquarespacestraipuSumoNyocha GizmoNnyocha anụAzụmahịaIche echicheThriveCartụdị ụdịadịghị amantanetịWebinarJamwoocommerceWordPresswuoNwunyeikeFordị Zoho
Igodo nke ihe mmebe nke ọdịda peeji nke
Kedu ihe bụ VPN? Olee Otú I Si Ahọrọ Otu?